October 6, 2021 - Khitalin Media
October 6, 2021 by Khitalin Media
တစ်လအတွင်းမှာ တင်ပါးလေးကို လုံးဝန်းကျစ်လစ်သွားစေမယ့် လေ့ကျင့်ခန်း (၅) မျိုး ပျိုမေတို့ တင်ပါးလေးတွေ လှဖို့ ထိုင်ထလေ့ကျင့်ခန်း တစ်မျိုးပဲ လုပ်လို့ရ တယ်လို့ မထင်ပါနဲ့နော် ။ထိုင်ထလုပ် ရတာ မ ကြိုက်တဲ့သူလေးတွေ အတွက် တင်ပါးလေးတွေ လုံးဝန်းကျစ် လစ်လှပဖို့ လေ့ကျင့်ခန်း လွယ်လွယ်လေးတွေ ဖော်ပြပေး လိုက်ပါတယ်နော် လေ့ကျင့်ခန်း -၁ တစ္လအတြင္းမွာ တင္ပါးေလးကို လုံးဝန္းက်စ္လစ္သြားေစမယ့္ ေလ့က်င့္ခန္း (၅) မ်ိဳး ပုံထဲကလို လက်ဝါး- ဒူးနဲ့ ခြေဖမိုးတွေ ကြမ်းပြင်မှာ ထိထားတဲ့ ပုံစံမျိုးနေပါ။ခြေထောက် တစ်ဖက်ကို ဘေးဘက်ကို ဆန့်တန်း လိုက်ပြီး နဂိုပုံစံအတိုင်းနေပါ။အဲ့ဒါကိုခြေထောက်တစ်ဖက်ကို (၁၀)ခေါက်စီ လုပ်ပေးရုံနဲ့ တင်ပါးဘေး ဘက်မှာ ချိုင့်နေ တဲ့နေရာတွေမှာ အသားပြည့်လာမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ … Read more
နဂိုကထကျ ရငျသားပိုဖှံ့ဖွိုးလာစမေယ့ျ လှယျကူတဲ့ လေ့ကငြ့ျခနျး (၄) ခု ရငျသားက မြိုးရိုးဗီဇ-စားသောကျပုံ ပုံစံစတဲ့ အကွောငျး အမြိုးမြိုးကွောင့ျ တဈယောကျနဲ့ တဈယောကျ အရှယျအစား မတူပါဘူး။ ကိုယ့ျမြိုးရိုးမှာ ရငျသားသေးတဲ့ သူမြားရငျ ကိုယျ လညျး သူတို့လို ဖွဈတတျ ပါတယျ။ နဂိုကထက် ရင်သားပိုဖွံ့ဖြိုးလာစေမယ့် လွယ်ကူတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်း (၄) ခု နဂိုကထက် ရင်သားပိုဖွံ့ဖြိုးလာစေမယ့် လွယ်ကူတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်း (၄) ခု နဂိုကထက် ရင်သားပိုဖွံ့ဖြိုးလာစေမယ့် လွယ်ကူတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်း (၄) ခု ဒါပမေဲ့ ကိုယ့ျရငျသားကို စားသောကျပုံ ပွောငျးလဲခွငျး၊လေ့ကငြ့ျခနျး လုပျခွငျးစတဲ့ ကွိုးစားမှုတှနေဲ့ နဂို ကထကျပိုဖှံ့ ဖွိုးလာအောငျ ကွိုးစားနိုငျ ပါတယျ။ အကောငျးဆုံး ကတော့ အားကစား … Read more
မိန်းမ တွေ ဖောက်ပြန် ရတဲ့ အကြောင်းပြချက်များ
လူတွေပြောပြောနေတာ ယောကျ်ား တွေက သစ္စာ မရှိဘူး၊ ဆော် တကာ နဲ့ပတ်အိပ်ချင်နေတယ် ဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတာ တွေပါ။ မိန်းမတွေ (…..)ကိစ္စကြောင့် ဖောက်ပြန်တာနည်းပြီး သူတို့လိုချင်တာက ကိုယ့်အပေါ် သစ္စာရှိမယ့်ယောကျ်ား နဲ့ သူ တို့ ဘဝဖူလုံမှုရှိအောင် မိန္းမ ေတြ ေဖာက္ျပန္ ရတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား မိန္းမ ေတြ ေဖာက္ျပန္ ရတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား မိန္းမ ေတြ ေဖာက္ျပန္ ရတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား ပူပန်စရာမရှိအောင်ထားနိုင်တဲ့ ယောကျ်ား လို့ပြောနေကြပါတယ်။ ဒါတွေဟာ ကောလဟာလ သက်သက်တွေပါ။ ခုတလော ရေပန်းစားနေတဲ့ ယောကျ်ားလေး တွေပဲ နှိပ်တဲ့ အနှိပ်ခန်းတွေ ဘယ်သူတွေသွားနေတယ်ထင်သလဲ။ ဘာတွေ သွားပြီး ဘာတွေလုပ်နေတယ်ထင်သလဲ။ ဖောက်ပြန်တာ မိန်းမ ယောကျ်ားမရွေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် … Read more
အနာအဆာပါတိုင်း တန်ဖိုးမဲ့တယ်ဆိုရင်( ဖတ်ကြည့်ပါ အရမ်းကောင်းတယ် ) အနာအဆာ ပါတိုင်း တန်ဖိုးမဲ့ တယ်ဆိုရင် ဆန်ထဲ ကြွက်ချေးပါ လာရင်ဆန် အကုန်လုံးကို သွန်ပစ် မယ့်အစား ကြွက်ချေးကို ဖယ်စားသင့် တယ် အနာ ပါတဲ့ ငှက်ပျောသီးတစ်လုံးက ဆာလောင်ငတ် မွတ်နေသူ အဖို့ ကတော့ အနာအဆာပါတိုင္း တန္ဖိုးမဲ့တယ္ဆိုရင္( ဖတ္ၾကည့္ပါ အရမ္းေကာင္းတယ္ ) အနာအဆာပါတိုင္း တန္ဖိုးမဲ့တယ္ဆိုရင္( ဖတ္ၾကည့္ပါ အရမ္းေကာင္းတယ္ ) အနာအဆာပါတိုင္း တန္ဖိုးမဲ့တယ္ဆိုရင္( ဖတ္ၾကည့္ပါ အရမ္းေကာင္းတယ္ ) အနာ ဖယ်ပီးစား တတ်ရင် အာဟာ ရဖြစ်မယ် ။ ထို့အတူပါပဲ လူ့လောက မှာ လူလူ ချင်းပေါင်း သင်း ဆက်ဆံရေးမှာ အားန ည် … Read more
ကိုယ်အရမ်းချစ်နေလျက်နဲ့ တကယ်တမ်း လမ်းခွဲလိုက်ကြတဲ့အခါ ဘာမှသိပ်မခံစားရတော့တာမျိုးဖြစ်ဖူးလား
ကိုယ်အရမ်းချစ်နေလျက်နဲ့ တကယ်တမ်း လမ်းခွဲလိုက်ကြတဲ့အခါ ဘာမှသိပ်မခံစားရတော့တာမျိုးဖြစ်ဖူးလား အဲ့ဒါက တကယ်မချစ်ခဲ့တာလဲ မဟုတ်သလို ကိုယ်ချစ်နေဆဲအချိန်ထဲက ကိုယ်သူ့ကို လက်လျှော့နေမိတာမျိုးကြောင့်ပါ။ ကိုယ်မကြိုက်တာတွေ ကိုယ်မနှစ်သက်တာတွေပဲ သူလုပ်နေတဲ့အခါ ကိုယ်ကြိုးစားပြီးပြင်ပေးခဲ့မိမှာပါ။ အမြဲတမ်းစိတ်ပူ ပြီး ပြောနေခဲ့မှာပါ။ ပြောင်းလဲလာဖို့ကိုလဲ မျှော်လင့်မိခဲ့အုန်းမှာပါ။ နောက်ဆုံးသူ့ဘက်က ဘာမှမထူးခြားလာတဲ့အခါ ကိုယ့်ဘက်ကပဲ လက်လျှော့ပေးလိုက်မိပါတော့တယ်။ ကိုယ့်ဘက်ကပဲ လက်လျှော့ရတာတွေ များလာတဲ့အခါ သူဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ ကိုယ်နဲ့ဝေးလာတယ်။ သူ့ဘဝနဲ့သူ ကိုယ့် ဘဝနဲ့ကိုယ် ဖြစ်လာတော့တယ်။ သူကြိုက်သလိုသူနေ ကိုယ်ပျော်သလိုကိုယ်နေ ဖြစ်လာတော့တယ်။ ကြာလာတဲ့အခါ သူနဲ့ကိုယ်ဟာ စိတ်တွေပါ ဝေးလာ တော့တယ်။ အတူမရှိတဲ့အချိန်တောင် စိတ်မပူတော့ပဲ နေတတ်လာတဲ့အထိ အေးစက်လာတော့တယ်။ အတူရှိတဲ့အချိန်တွေမှာလဲ ကိုယ့် အတွက် ဘာမှမထူးခြားနေတော့ပဲ သာမန်လိုပဲဖြစ်လာတယ်။ နောက်ဆုံးဝေးသွားတဲ့အချိန်ထိ သူဟာကိုယ့်အတွက် အထူးတလည် မနာကျင်စေတော့ဘူး။ ဒါတွေအားလုံးဟာ ကိုယ်သူ့ကို … Read more
Zawgyi လက်ရှိဘဝမှာ မိဘကျေးဇူးကို အကျေဆပ်တဲ့နည်း မိဘကျေးဇူးဆပ်ခြင်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဘုရား အဆုံးအမကို ပြောကြပြီဆိုရင် ” မိဘကျေးဇူးကို ဘယ်လိုမှ ကျေအောင် မ ဆပ်နိုင်ဘူး” လို့ လူအများ ပြောလေ့ ရှိကြတယ်။အမှန်က “ကျေအောင် မဆပ်နိုင်ဘူး”လို့ ဟောထားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျေအောင် ဆပ်ဖို့ မလွယ်ဘူး။လွယ်လွယ်ဆပ်ရုံနဲ့ ကျေးဇူးမကျေနိုင်ဘူး။သာမန်ဆပ်ရုံနဲ့ ကျေးဇူးမကျေနိင်ဘူး။ အထူးဆပ်မှ ကျေးဇူးကျေနိုင်တယ် လို့ ဆိုလိုပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ ဟောကြားချက်မူရင်းကို နားထောင်ကြည့်ပါ။ ချစ်သား, ချစ်သမီးတို့ ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်ရဲ့ ကျေးဇူးကို အလွယ်တကူ ဆပ်ရုံနဲ့ မကျေနိုင်ဘူး။ ကျေအောင် ဆပ်ဖို့ မလွယ်ဘူး လို့ ငါဘုရား ပြောချင်တယ်။ ပုဂ္ဂိုလ် နှစ်ယောက် ဆိုတာ မွေးမိခင်နဲ့ မွေးဖခင် အရင်းအချာကို ပြောတာပါ။ ချစ်သား, … Read more
ဘေဘီမောင်ကို ဝိုင်းဝန်းပြောဆိုနေကြတာကြောင့် မယားထိဓားကြည့်ဆိုတဲ့အထာကြီးနဲ့ တက်ဖြဲလာတဲ့ အဆိုတော် သားဂန်း…
ဘေဘီမောင်ကို ဝိုင်းဝန်းပြောဆိုနေကြတာကြောင့် မယားထိဓားကြည့်ဆိုတဲ့အထာကြီးနဲ့ တက်ဖြဲလာတဲ့ အဆိုတော် သားဂ န်း… အဆိုတော်သားဂန်းကတော့ဘေဘီမောင်နဲ့ချစ်သူတွေအဖြစ်လက်တွဲနေတာနှစ်အတော်ကြာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။၂၀၂၂ခုနှစ်မှာ လက်ထပ်မှာဖြစ်ကြောင်းပရိသတ်တွေကိုအသိပေးထားပေမယ့်အခုကတည်းကဘေဘီမောင်ရဲ့အိမ်တွင်နေထိုင်လျက်ရှိနေ ပါတယ်။ အနေအေးပေမယ့်ဇနီးဖြစ်သူကိုအရမ်းချစ်တာကြောင့်အခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေမှာသူ့အနေနဲ့တစ်စိတ်တစ်ဒေသပြော ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ မနေ့ကတော့သားဂနျးရဲ့လူမှုကှနျယကျတှငျအခုဖွဈနတေဲ့ကိစ်စတှနေဲ့ပတျသကျပွီးစာတဈခြို့ရေးသားထားတာဖွဈပါတ ယျ။ဒါကတော့သူ့ဇနီးအားအပွ.ဈဝိုငျးပွောနကွေတဲ့လူတဈခြို့ကိုေ.ဒါသထှကျပွီးစကားတဈခှနျးဖွငျ့ပွနျလညျတုံ့ပွနျလို ကျတာဖွဈပါတယျ။ ”ကြှနျတောျကစိတျဆိုးခဲတယျနောျ။စိတျဆိုးရငျလညျး Facebook ကနမေဆို.းတတျဘူးအခုလိုမြိုးစာတငျရတာကို လဲမကွိုကျဘူး။အကောငျ့ထဲမှာလူ့ယဉျကြေးတှရှေိနလေို့ပါ”ဆိုပွီးရေးတငျထားတာဖွဈပါတယျ။ သားဂနျးဟာအာဏာမသိ.မျးခငျဇနျန ဝါရီလ(၃၁)ရကျကတညျးကနအေခုထိလူမှုကှနျယကျတှငျဘာအကွောငျးမှဝမြှေခွ ငျးမရှိဘဲအခုခြိနျမှဇနီးအတှကျစာရေးသားခဲ့တာကွောငျ့ပရိသတျတှရေဲ့ေ.ဝဖ.နျခွငျးတှကေိုခံနရေတာဖွဈပါတယျ။ သားဂနျးတငျထားတဲ့စာနဲ့ပတျသကျပွီးမပေနျးခြီမှလညျး”မိနျးမကိစ်စမိနျးမပဲရှ.ငျးမယျနောျacကလော့ကနြတောဆို အခုထပှငျ့လာပွီလား၊ သူပဲယူရေးနေတာသူ့အမျိုးသားအကောင့်၊ မိန်းမကိစ္စယောကျ်ားပါလာရင်ငါနဲ့နင်ပါချိ.န်းထို.းမလားသားကြီး မှတ်ချက်.၂ယောက်၁ယောက်ပေးတယ်”ဆိုပြီးပြန်လည်တုံ့ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်ကြီးလဲအမြန်ဆုံးငြိမ်းချမ်းပြီးဖတ်ရှု့ပေးကြတဲ့မြန်မာပြည်သူ/သားများအားလုံးစစ်အာဏာရှင်လက်အောက်က နေအမြန်ဆုံးလွ.တ်မြောက်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်။ crd ဘဘေီမောငကြို ဝိုငြးဝနြးပှောဆိုနကှတောကှောင့ြ မယားထိဓားကှည့ဆြိုတဲ့အထာကှီးနဲ့ တကဖြှဲလာတဲ့ အဆိုတောြ သားဂနြး… အဆိုတောသြားဂနြးကတော့ဘဘေီမောငနြဲ့ခစွသြူတှအဖှေဈလကတြှဲနတောနှဈအတောကြှာနပှေီဖှဈပါတယြ။၂၀၂၂ခုနှ ဈမှာလကထြပမြှာဖှဈကှောငြးပရိသတတြှကေိုအသိပေးထားပမယေ့အြခုကတညြးကဘဘေီမောငရြဲ့အိမတြှငနြထေိုင လြကွရြှိနပေါတယြ။ အနအေေးပမယေ့ဇြနီးဖှဈသူကိုအရမြးခစွတြာကှောင့အြခုလကရြှိဖှဈနတေဲ့ကိဈစတှမှောသူ့အနနေဲ့တဈစိတတြဈဒသ ပှေောပေးနတောဖှဈပါတယြ။ မနေ့ကတော့သားဂနြးရဲ့လူမှုကှနယြကတြှငအြခုဖှဈနတေဲ့ကိဈစတှနေဲ့ပတသြကပြှီးစာတဈခွို့ရေးသားထားတာဖှဈပါတ ယြ။ဒါကတော့သူ့ဇနီးအားအပှ.ဈဝိုငြးပှောနကှတေဲ့လူတဈခွို့ကိုေ.ဒါသထှကပြှီးစကားတဈခှနြးဖှင့ပြှနလြညတြုံ့ပှနလြို ကတြာဖှဈပါတယြ။” ကွှနတြောကြစိတဆြိုးခဲတယနြောြ။စိတဆြိုးရငလြညြး Facebook ကနမဆေို.းတတဘြူးအခုလိုမွိုးစာတငရြတာကို လဲမကှိုကဘြူး။အကောင့ထြဲမှာလူ့ယဉကြွေးတှရှေိနလေို့ပါ”ဆိုပှီးရေးတငထြားတာဖှဈပါတယြ။ သားဂနြးဟာအာဏာမသိ.မြးခငဇြနနြ ဝါရီလ(၃၁)ရကကြတညြးကနအခေုထိလူမှုကှနယြကတြှငဘြာအကှောငြးမှဝမွှ ခှေငြးမရှိဘဲအခုခွိနမြှဇနီးအတှကစြာရေးသားခဲ့တာကှောင့ပြရိသတတြှရေဲ့ေ.ဝဖ.နခြှငြးတှကေိုခံနရတောဖှဈပါတယြ။ သားဂနြးတငထြားတဲ့စာနဲ့ပတသြကပြှီးမပနြေးခွီမှလညြး”မိနြးမကိဈစမိနြးမပဲရှ.ငြးမယနြောြacကလော့ကနွတောဆို အခုထပှင့လြာပှီလား၊ သူပဲယူရေးနတောသူ့အမွိုးသားအကောင့ြ၊ မိနြးမကိဈစယောကွြားပါလာရငငြါနဲ့နငပြါခွိ.နြးထို.းမလားသားကှီးမှတခြ … Read more
မျက်နှာ ပြောင်တဲ့ ချစ်သူ မိန်းခလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ကောင်လေးတွေရဲ့ အားသာချက် (5) ချက်….
သင့်ချစ်သူ ကောင်မလေးဟာ အမြဲတမ်း ရယ်စရာ ဟာသတွေ ပြောပြီးမျက်နှာပြောင် တတ်သူတစ်ယောက်ဟုတ်တယ် ဆို ရင်တော့သင်ဟာ ကံအကောင်းဆုံး လူသားတစ်ယောက်ပါ။ယောင်္ကျားလေးဆန်ပြီး မ်က္ႏွာ ေျပာင္တဲ့ ခ်စ္သူ မိန္းခေလးကို ပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ ေကာင္ေလးေတြရဲ႕ အားသာခ်က္ (5) ခ်က္…. မ်က္ႏွာ ေျပာင္တဲ့ ခ်စ္သူ မိန္းခေလးကို ပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ ေကာင္ေလးေတြရဲ႕ အားသာခ်က္ (5) ခ်က္…. မ်က္ႏွာ ေျပာင္တဲ့ ခ်စ္သူ မိန္းခေလးကို ပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ ေကာင္ေလးေတြရဲ႕ အားသာခ်က္ (5) ခ်က္…. ဟာသဉာဏ် ထူးကဲတဲ့ ကောင်မလေးတွေဟာ သူတို့ရဲ့ချစ်သူ အပေါ်မှာယုံကြည်စိတ် အပြည့်အဝရှိတဲ့အပြင် ဘဝခရီးတစ်ခု လုံးကိုပါ သင်နှင့်အတူ ဖြတ်သန်းဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားပြီးသား … Read more
တစ်ပတ်အတွင်း အကိတ်ဖြစ်အောင် ပြုလုပ်နည်း (၅) မျိုး မိန်းခလေး ဆိုတာမျိုးက ကိတ်မှ ကြည့်လို့ကောင်းတာ အမှန်ပါပဲ ။ မလှပဲ နေပါစေ အုံးတော့ ၊ ရှိုက်ဖို ကြီးငယ် အသွယ်သွယ်နဲ့ ဖုသင့်တဲ့ နေရာဖု ၊ ဖောင်းသင့်တဲ့ နေရာမှာ ဖောင်းနေမှ ပုရိသ ယောက်ျားတွေရဲ့ ဝိုင်းဝိုင်း လည်ခြင်းကို ခံရ တာပါ ။ ကဲ.. ဒါ့ကြောင့် နေ့ချင်း ညချင်း အကိတ်မ ဖြစ်ချင်တဲ့ LCD ညီမလေးများ အတွက် တပတ်အတွင်း ကိတ်နည်း (၅) မျိုးကို ဖော်ပြပေးလိုက် ပါတယ် ။ တစ္ပတ္အတြင္း အကိတ္ျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္နည္း (၅) မ်ိဳး တစ္ပတ္အတြင္း အကိတ္ျဖစ္ေအာင္ … Read more
အဆီပြန်ပြီး ဝက်ခြံထွက်တတ်တဲ့ အသားအရေအတွက် သဘာဝအတိုင်း အိမ်မှာ ပေါင်းတင်လို့ရမယ့် နည်းလမ်းလေးတွေ ကို ပြောပြပေးချင်ပါတယ်နော်.. ဘယ်လိုနည်းလမ်းလေးတွေလည်းဆိုတော့… ပူစီနံ ဝက်ခြံပျောက်ကင်းဖို့ အကောင်းဆုံး မျက်နှာပေါင်းတင်နည်းကတော့ ပူစီနံအရွက်ပါပဲ။ ပူစီနံရွက်ဟာ အဆီပြန်တာကို လည်း အထူးသက်သာစေတာမို့ ဝက်ခြံကင်းစင်ဖို့ ပူစီနံရွက်ကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ပါဝင်ပစ္စည်း ၁။ ပူစီနံအရွက် ၂။ ပျားရည် ပြုလုပ်နည်း ပူစီနံရွက်တွေကို ကြိတ်လိုက်ပါ။အဲဒီနောက် ပျားရည်ကို ရောထည့်ပါ။မျက်နှာပေါ်လိမ်းပေးပြီး ခြောက်တဲ့ထိထားပါ။ရေ အေးနဲ့ မျက်နှာသစ်ပါ။ သခြားသီး သခွားသီးဟာ ဝက်ခြံကြောင့် ဖြစ်တဲ့ရောင်ရမ်းတာတွေကို သက်သာစေပါတယ်။ ပါဝင်ပစ္စည်း ၁။ သခြားသီး ၂။ ဒိန်ချဉ် (ထည့်ချင်ထည့်လို့ရပါတယ်) နည်းလမ်း သခွားသီးကို ခြစ်ချပြီး အဖတ်နဲ့ အရည်ကို ခွဲကာ ရေခဲသေတ္တာထဲထည့်ထားပါ။သခွားသီးဖတ်ကို ယူပြီး မျက်နှာပေါ်က … Read more